PVC ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် / ပျော့ရုပ်ရှင်
PVC FOAM ဘုတ်
PVC စာရွက် & ရုပ်ရှင်
We have been experienced manufacturer. Wining the majority of the crucial certifications of its market for Thick Clear Plastic Roll, 15mm Acrylic Sheet , Transparent Pet Film , PVC အဘယ်သူမျှမလမိုင်းစာရွက် ,Pvc Laminated Board . We Sincerely welcome customers from all over the world to visit us, with our multifaceted cooperation and work together to develop new markets, create win-win brilliant future. The product will supply to all over the world, such as Europe, America, Australia,Azerbaijan , Canberra ,Qatar , Iraq .We warmly welcome you to come to visit us personally. We hope to establishalong-term friendship based on equality and mutual benefit. If you want to get in touch with us, please do not hesitate to call. We will be your best choice.
စိတ်ကြိုက်ပြက္ခဒိန် UV ခံနိုင်ရည်ရှိသော matt ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပျော့ဖလင်လိပ်
Roll အတွက် PVC တင်းကျပ်အားရှင်းလင်းရန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
တရုတ် Clear Acrylic Sheet
နှင်းခဲများရှင်းရန် PVC စာရွက်
အရည်ကြည်ဖုသည် PVC ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
(APET / PETG / ပေးနေရတာကိုစာရွက်) ဖွဲ့စည်းခြင်းဖုန်စုပ်သည်ပွင့်လင်းပေစာရွက်
ပွင့်လင်းမြင်သာသောပလပ်စတစ် PVC ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပျော့ဖလင်စာရွက်
ခေါက် Box ကိုများအတွက် PVC စာရွက်
Jean Ascher 2021.02.28 01:53:28
Jane 2020.12.29 23:00:18
Isabel 2020.06.20 00:28:54
Deirdre 2020.03.23 02:53:35
Danny 2020.03.09 20:04:50
Sophia 2019.11.24 19:55:17
PVC Sheet များ 4x8
PC (ပိုလီကာဗွန်နိတ်) စာရွက်
HSQY ပလပ်စတစ်အုပ်စု- PVC စာရွက်/ရုပ်ရှင်၊ PET/GAG/PETG စာရွက်၊ ACRYLIC/PC/PS Sheet အတွက် တရုတ်ထိပ်တန်း PVC ထုတ်လုပ်သူ